आजको राशिफाल (२०७७ बैशाख २१ गते) - Sarokar Khabar
२१ बैशाख २०७७, आईतवार ००:५४
२१ बैशाख २०७७, आईतवार ००:५४0
मेष : बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । चिताएको काम सम्पादन हुनेछ । पहिलेका कमजोरीलाई सुधार्ने मौका छ । मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ । मान(सम्मान प्राप्त हुनेछ । सम्पादित कामबाट धन लाभ हुनेछ । आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ । अध्ययनमा प्रगति हुनेछ ।
वृष : नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन् । आफन्तको सान्निध्य र अभिभावाकको स्नेह प्राप्त हुनेछ । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ । अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ । पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ । विगतका कमीकमजोरीमा सुधार आउनेछ । प्रयत्न गरेको काम बन्नेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ ।
मिथुन : भैपरी आउने खर्चले चिन्ता बढाउन सक्छ । सुरक्षाका लागि फाइदाका वस्तु त्याग्नुपर्ला । कर्जामार्फत धन र आवश्यकताका वस्तु जुटाउन सकिनेछ । तत्काल फाइदा लिँदा लाभांश अरूलाई पनि बाँड्नुपर्ला । आफ्नो मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन् । अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला । सरसापट र सहयोगमा केही नगद बाहिरिने देखिन्छ ।
कर्कट : मिहिनेतले आम्दानी बढाउनेछ । आयस्रोत बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । दिगो काम थालनी हुन सक्छ । पढाइमा पनि प्रगति हुनेछ । सट्टापट्टा, लेनदेन आदिमा फाइदा हुनेछ । व्यापारमा थन्किएका वस्तु बिक्री हुनेछन् र अड्किएको रकम उठ्नेछ । श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ । भविष्यका लागि रुचिका विषयमा लगानी बढाउन सकिनेछ ।
सिंह : भाग्यवश कीर्तिमानी काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिनेछ । दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । सामाजिक दायित्व बढ्नेछ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ । व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ । प्रयत्न गर्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु लाभ होला । सहयोगीहरूले हिम्मत दिलाउनेछन् । प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ ।
कन्या : परिस्थिति प्रतिकूल देखिए पनि भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । मिहिनेत गर्दा पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना छ । विगतका कमजोरीमा क्रमशस् सुधार आउनेछ । लगनशीलताले राम्रै लाभ दिलाउन सक्छ । पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन् ।
तुला : काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति रहनेछ । अरूका काममा धेरै समय खर्चनुपर्ला । विगतका समस्या बल्झिन सक्छन् । सानातिना काम र घरेलु समस्यामा अल्झनुपरे पनि बुद्धिको उपयोगले समस्या सुल्झाउन सफल भइनेछ । शुभचिन्तकहरूको साथले कर्मयोग बलियो रहनेछ । तर अरूको भर पर्दा काम अधुरो रहन सक्छ ।
वृश्चिक : छोटो समयमा फाइदा उठाउन सकिनेछ । अध्ययन, लेखन तथा मनोरञ्जनमा समय बित्नेछ । मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने शुभचिन्तकहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ । भौतिक साधन जुट्नाले आम्दानी बढाउने काम गर्न सकिनेछ । सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ । विशेष उपहार प्राप्त हुन सक्छ । प्रियजनसँगको सान्निध्यले दिन रमाइलो रहनेछ ।
धनु : भौतिक साधन जुट्नाले दिन उत्साहजनक रहनेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ । नयाँ योजना शुभारम्भ गर्ने समय छ । बुद्धिको उपयोगले पहिलेको उपलब्धि जोगाउन सफल भइनेछ । शत्रुता साध्नेहरू स्वयं कमजोर हुनाले फाइदा हुनेछ ।
मकर : आँटले सजिलै लक्ष्यमा पुर्याउनेछ । प्रयत्न गर्दा दिगो फाइदा हुने काम सम्पादन हुनेछ । सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ । अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ । नयाँ काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ । पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ । व्यापारले फाइदा दिनेछ । तत्काल धेरै गर्न नसकिए पनि पछिका लागि जग बसाउने समय छ ।
कुम्भ : पुरानो सम्झौता तोड्नुपर्ने हुन सक्छ । अनावश्यक हल्लाको पछि लाग्दा व्यर्थैमा दुस्ख पाइनेछ । प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ला । बेसुरमा दिइएको वचनले पनि समस्या निम्त्याउनेछ । साइनो गाँस्नेहरूको भरपर्दा लक्ष्य प्राप्ति नहुन सक्छ । समयमा सजग नबन्दा शुभचिन्तकहरू समेत टाढिनेछन् । दिगो योजनाका साथ अघि बढ्दा बिस्तारै लाभ मिल्नेछ ।
मीन : सहयोगीहरूले साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन् । परिश्रमअनुसार राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ । प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिनेछ । मिहिनेत गर्दा उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ ।
लकडाउनमा ५ हजार भन्दा बढीलाई जनप्रतिनिधिले गरे उद्धार
ज्योतिषाचार्य : हरिप्रसाद पौडेल कोरोना महामारी शान्त हुनेः हाल विश्वभर फैलिएको कारोनारोगको महामारी वैशाखको प्रारम्भबाट नै शान्त भएर जाने देखिन्छ । वर्षभरि नै जनस्वास्थ्यमा आघात हुने ठूला महामारीहरु
५ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०२:१४0
आज मिति वि.सं. २०७७ जेठ ५ गते सोमवार, इ.स. २०२० मे १८ ने.सं. ११४० बछलागा ज्येष्ठ कृष्णपक्ष एकादशी, मेष : आकस्मिक खर्चले चिन्ता बढाउन सक्छ । समय दिन नसक्दा बन्न लागेको कामसमेत बिग्रन सक्छ । दैनिकी च
केशव देवकोटाद्धारा केन्द्रिय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा २१ बैशाख २०७७, आईतवार ००:५४
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल २१ बैशाख २०७७, आईतवार ००:५४
कविता : दिउ अरुलाइ नै दोष दिउ ! २१ बैशाख २०७७, आईतवार ००:५४
सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सम्मानित २१ बैशाख २०७७, आईतवार ००:५४
सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना २१ बैशाख २०७७, आईतवार ००:५४
प्लानद्धारा कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २१ बैशाख २०७७, आईतवार ००:५४
कोभिड–१९ अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २१ बैशाख २०७७, आईतवार ००:५४
गोलन्जोरमा कृषकलाई राँगा र बोका वितरण २१ बैशाख २०७७, आईतवार ००:५४
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोध २१ बैशाख २०७७, आईतवार ००:५४
दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण २१ बैशाख २०७७, आईतवार ००:५४